လျှောက်လွှာ - WY Precision Co. , Ltd မှ
အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာများတွင်အသုံးပြုဘောလုံးကို screw နှစ်ခု, စက်ရုံအလိုအလျောက်စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ, စက်ကိရိယာတခု, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ဆီမီးကွန်ဒတ်တာစက်မှုလုပ်ငန်းများတိကျစွာ-မြေပြင်ဘောလုံးကို screw နှစ်ခု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမှအကျိုး။
WY Precision Co. , Ltd မှ
စက်ရုံ Automation Systems က
WY Precision ပေါင်းစပ်စက်ရုံအလိုအလျောက်စနစ်များ applications များပါဝင်သည်: စက်ရုပ်, ကြှေးမှေးနည်းပညာ, အလိုအလျောက် Dispensing, လေဆာအပြောင်းအလဲနဲ့ applications များ, စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်များ, စစ်ဆေးရေးနှင့်စမ်းသပ်မှုစနစ်များ, Elevators, Automated စည်းဝေးပွဲကိုစနစ်များနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပလက်ဖောင်း။
မော်တော်ကား Electro Actuation
မော်တော်ယာဉ်စျေးကွက်များတွင်အနိမ့်လောင်စာသုံးစွဲမှုနှင့်အနိမ့်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အတူမြောက်မြားစွာအသစ်ကမျိုးစပ်ကားများနှင့်အင်ဂျင်အတွက် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရန်နှင့်ယင်းတို့၏အိပ်ဇောသန့်စင်စေရန်တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, များစွာသောစီမံကိန်းများကိုဘောလုံးကို screw နှစ်ခုအသုံးချဖို့မြန်ဆန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလျှပ်စစ်မော်တာ drives တွေကိုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့် သာ. ကြီးမြတ်ကားတစ်စီးသာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်ပိုမိုလုံခြုံမောင်းနှင်မှုအောင်မြင်ရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
linear ရွေ့လျားမှုထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ်စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများဆီမီးကွန်ဒတ်တာကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ယန္တရား, Semiconductor ပရိသနှင့်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများစက်ပစ္စည်းများနှင့်န့်ကိုကိုင်တွယ်ဘို့ Semiconductor ပစ္စည်းကိရိယာများ, အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။
linear ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်ခြင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ဘုံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်, များပြား linear drive ကိုရှေးခယျြစရာမရရှိနိုင်ရှိပါတယ်။ သို့သျောလညျး, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ / ဓာတ်ခွဲခန်း applications များ၏သဘောသဘာဝထိုကဲ့သို့သော, တိကျသောယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ပြန်လုပ်လှုပ်ရှားမှုသေချာအဖြစ်ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများ, တင်ဆက်; ပို. ပို. သေးငယ်နေရာများအတွင်းကွဲပြားပြောင်းလဲနေသောဝန်ကိုင်တွယ်; wear အပျက်အစီး၏အနည်းဆုံးပမာဏလိုအပ်ကြောင်းစင်ကြယ်သော enviroments မှာ operating; နှင့်စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းကိရိယာမှဆူညံသံ, တုန်ခါမှုနှင့်စက်မှုပြတ်တောက်လျှော့ချ။